Malunga Nathi-Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Uvavanyo lweZifo ezosulelayo
Uvavanyo lweziyobisi lokuyeka
Uvavanyo olukhawulezayo lweHormone
Uvavanyo lokuxilonga izilwanyana
Hangzhou Testsea biotechnology co., LTD.lishishini lesizwe lobugcisa obuphezulu, eliseHangzhou. ITestsea inabaphandi abaninzi kunye nabasebenzi abaphumelele kwiyunivesithi yasezhejiang naphesheya kweelwandle. I-Testsea ikhethekileyo kuphando, uphuhliso, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kwezinto ezibonakalayo zokuxilongwa kwezonyango kunye novavanyo lokhuseleko lokutya. senze isicelo seentlobo ezingama-28 zamalungelo awodwa omenzi wechiza ezibandakanya uxilongo lwezonyango, uvavanyo olukhawulezayo lokhuseleko lokutya, i-enzymatic immunoassay yokutya kunye nokulungiswa kwe-enzyme entsha. ITestsea ibonelela ngezisombululo ezigqibeleleyo zemathiriyeli kumaziko ophando lwenzululwazi, amashishini, amaziko ophando kunye namanye amaziko kwihlabathi. Indawo yoshishino ye-Testsea iyonke ingaphezulu kwama-2,000 eemitha zesikweri, kubandakanya i-400 yeemitha zesikwere se-GMP 100,000-level yokucoca iworkshop, inkampani yethu ilandela ngokungqongqo nge-ISO13485 kunye ne-ISO9001 yokusebenza kwenkqubo yolawulo lomgangatho ngophando, imveliso, ulawulo lomgangatho, imali, intengiso yasekhaya kunye namazwe ngamazwe. iintengiso njl Iimveliso zethu zamkelwe kakuhle ngabasebenzisi abaninzi basekhaya nakwamanye amazwe. Ukongeza, siseka ubudlelwane obuhle beshishini kunye neeyunivesithi ezininzi zasekhaya kunye namashishini emveliso yokuxilonga kwi-vitro, nakwimpuma-mpuma yeAsia, iYurophu, iAfrika, iLatin America kunye namanye amazwe.
I-Tessea ineqela lophando kunye nophuhliso elikhokelwa ngoogqirha kunye neenkosi kunye nabasebenzi abachwephesha kunye neziko lezixhobo ezifanelekileyo. Umthamo wemveliso ye-antigen edibeneyo ifikelele kwi-18g / ngenyanga.
I-Tessea isukela "ingqibelelo, umgangatho, uxanduva" ingqikelelo kunye nokubambelela umgangatho, injongo yokusebenzela uluntu kwaye ihlala iphuhlisa izixhobo zovavanyo ezikumgangatho ophezulu ngomzamo.
Uvavanyo olukhawulezileyo lokuxilonga ukuchuma, isifo esosulelayo, iziyobisi zokuxhatshazwa kunye nonyango lwezilwanyana.
Iimvavanyo ezikhawulezayo zokuxilonga (RDTs) luhlobo lwe-point-of-care diagnostic, oku kuthetha ukuba olu vavanyo lwenzelwe ukubonelela ngeziphumo zokuxilonga ngokufanelekileyo kwaye ngokukhawuleza kwisigulane ngelixa sikwiziko lezempilo, indawo yokuhlola, okanye omnye umboneleli wezempilo. Ukufumana ukuxilongwa kwindawo yokunyamekela kunciphisa isidingo sokutyelelwa ngokuphindaphindiweyo ukufumana iziphumo zokuxilonga, ngaloo ndlela kuphuculwe ukucaca kokuxilongwa kunye namathuba isigulane siya kufumana unyango, ukunciphisa ukuxhomekeka kunyango oluqikelelwayo, kunye nokunciphisa umngcipheko wokuba isigulane siya kugula ngaphambili. uxilongo oluchanekileyo lwenziwa. Uvavanyo olukhawulezayo lusetyenziswa kwiinkalo ezahlukeneyo zokhathalelo-ukusuka kumakhaya ukuya kwiiklinikhi zokhathalelo oluphambili okanye amagumbi angxamisekileyo-kwaye uninzi lufuna okuncinci kwizixhobo zaselabhoratri okanye uqeqesho lwezonyango.
Idilesi: No.13-2 Indlela yaseGuanshan, kwiSithili saseYuhang, eHangzhou, eChina.
Ifowuni: 400-083-7817; 0086-15355433244
I-Hangzhou Testsea biotechnology co. , LTD. Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza
Canine Coronavirus Ag Rapid Test Kit, I-Feline Coronavirus Fcv Ag Test Kit, Uvavanyo lweCanine Coronavirus Ag, IKit yoVavanyo lweCoronavirus yeFeline, Uvavanyo lweCoronavirus lweFeline, Ikiti yoVavanyo lwe-Ag ye-Feline ePhakamileyo,